स्वास्थ्य | युनिभर्सल खबर
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 18, 2018 In: स्वास्थ्य
बीबीसी । मृत्युको समयमा मानिसको दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ ? कसैलाई पनि यसबारे वास्तविक जानकारी छैन । अनुसन्धानकर्ताहरुले यस विषयमा कैयौँ खोज गरिसकेको भएपनि अझै यसको रहस्य पूर्ण रुपमा खुलिसके...	Read more
तपाईं नियमित स्याउ खानुहुन्छ रु खानुहुन्न भने आजैदेखि खान सुरु गर्नुस् । किनकि दैनिक एउटा स्याउ खानेलाई मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने एक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अंग्रेजीमा उखानै छ–...	Read more
पिसाब लागेर बाथरुम जाँदा पिसाब नै आउदैन किन होला?
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 17, 2018 In: स्वास्थ्य
प्रोष्टेट ग्रन्थिको तौल औसतमा १० देखि २५ ग्रामसम्म हुन्छ । ५० वर्ष नाघेका पुरुषमा प्राय प्रोष्टेट ग्रन्थि बढ्ने क्रममा हुन्छ । ग्रन्थि वृद्धि हुने सिलसिलामा पिसाबनलीको प्वाल साँगुरो पारेर पि...	Read more
कानबाट पिप आउने कारण
कानले आवाज सुन्ने मात्र होइन शरीरको सन्तुलन पनि मिलाउने काम गर्छ । कानको मुख्य तीनवटा भाग हुन्छन्। बाहिरी भाग जसले बाहिरको आवाजलाई भित्र लैजाने काम गर्छ । मध्य भाग जसले बाहिरबाट उत्पन्न भएको...	Read more
स्त्रीको सेतोपानी बग्ने देखि पुरुषको अण्डाकोष सुनिनेसम्म एउटै घरायसी औषधी –
Posted By: युनिभर्सल खबरon: March 16, 2018 In: स्वास्थ्य
जीरा हामीले भान्सामा तरकारीमा मसलाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छौ । हामीलाई थाहा छैनकि जीरा कुन कुन रोगको औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर । हामीले यहाँ जीराको औषधीय गुण को विषयमा च...	Read more
भुलेर पनि कहिल्यै संगै नखानुहोस यी कुराहरु
खानेकुरा खानेमात्र भनेर हुदैन । कुन चिज कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा हामिले खानाबाट अमृत पाउनुको साटो बिष पाइरहेका हुन्छौ । खानाको सोखिन मान्...	Read more
यसकारण हुन्छ महिलाहरुको मिन्समा गडबडी
एजेन्सी : सामान्य अवस्थाको महिनावारी २१ देखि ३५ दिनको बीचमा हुनेगर्छ । नियमित महिनाबारी अरु बेलाभन्दा अगाडि पछाडि हुने, अत्यधिक रक्तस्राव हुने भएमा महिनावारी गडबडी भन्न सकिन्छ। महिनावारी सुर...	Read more
एजेन्सी । तामालाई हिन्दु परम्परा अनुसार पवित्र धातु मानिन्छ। र यसलाई वैदिक कार्यहरुमा अनिवार्य मानिन्छ । वैज्ञानिक अध्ययनहरुले समेत तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउनु स्वास्थ्यका हिसाबले निकै...	Read more
सरकारी डाक्टरकै प्रमाणपत्र नक्कली भएको विशेष अदालतको फैसला
काठमाडौं । विशेष अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई डाक्टरको प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गरेको छ । अदालतले गाइनोकोलोजिस्टका रुपमा कार्यरत डा सुनिल आचार्य र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्...	Read more